Mpanakanto tamin'ny faran'ny taompolo 1800 dia naneho ny fahitany ny taona 2000 | Famoronana an-tserasera
Ahoana ny fahitan'ny vondrona mpanakanto iray tamin'ny faran'ny taona 1800 ny taona 2000
Efa mitranga izany amin'ny sarimihetsika foronina amin'ny siansa tamin'ny taona 70 na 80 izay nametraka ireo mpiandany aminy amin'ny taona hihaonantsika toy ny nitranga vao haingana tamin'ny Back to the Future.
Zavatra izay mitranga matetika eo amin'ny tontolon'ny zava-kanto izay ezahin'izy ireo alaivo an-tsaina ny ho avy, toy ny nitranga tamin'ny vondrona artista frantsay izay nangatahina haka sary an-tsaina hoe hanao ahoana ny fiainan'ny olombelona sy ny noforoniny ara-tsiansa tamin'ny taona 2000 miaraka amina andian-tsary. Sary vitsivitsy izay nanandrana nandroso tao anatin'ny 100 taona ary kely kokoa ho an'ny ankehitriny.
Ny vokatr'izany dia andian-dahatsoratra sary retrofuturistic antsoina hoe 'En L'An 2000' (Tamin'ny taona 200). Novokarina izy ireo ho an'ny Universal Exhibition any Paris tamin'ny taona 1900, hatao pirinty taty aoriana ho toy ny fonosana sigara, ary koa karatra paositera eo anelanelan'ny 1899 sy 1910. Ny zava-nitranga dia tsy nozaraina mihitsy izy ireo, mandra-pahitan'ny mpanoratra science fiction Isaac Asimov azy ireo tamin'ny napetraka tamin'ny 1980. Izany no nahatonga azy hamoaka azy ireo tamin'ny taona 1986 ho an'ny sanganasa tsy foronina: "Futuredays: A nineteeen Century Vision of the Year 2000."
Ireo sary ireo dia mampiseho milina futuristic isan-karazany sy inona avy ireo sehatra anaty rano toy ny maro hafa milina manidina, voataonan'ilay famoronana sy ny fitiavan'ny romantika ny dikan'io hoe afaka manidina io fotoana io.
Public Domain Review izao dia manondro izany mbola misy 87 ny endriny ny carte postales nataon'i Jean-Marc Coté sy ireo mpanakanto hafa, izay 51 no ahitana azy ao Wikimedia Commons.
Eto ianao dia afaka mahita vitsivitsy amin'izany fampisehoana izany ny hevitra nananan'izy ireo momba ny ho avy izay niandry antsika rehetra tamin'ny fisehoan-javatra sasany, farafaharatsiny liana amin'ny fahalianana sy manokana toa an'io taovolo io na izay mety ho robot hanadiovana ny trano, zavatra iray izay tsy lavitra ny andavanandrontsika isan'andro.
Mpanakanto iray izay mety misy ifandraisany amin'ny fahitany azy afangaro amin'ny maoderina ny taloha es Rozalski.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ahoana ny fahitan'ny vondrona mpanakanto iray tamin'ny faran'ny taona 1800 ny taona 2000
Endritsoratra 20 angano noforonina
Diksionera kely momba ny endrika: Ebook maimaim-poana